April 10, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'April 10th, 2017'
Wasaaradda Amniga Gudaha oo ku Dhaqaagday Arin Aad loo soo Dhaweeyay (SAWIRRO)
April 10, 2017 – Wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumada federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Abuukar Islow ayaa maanta soo saaray amar lagu qaadayo dhagxaanta waaweyn ee lagu xirtay wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood. Amarkan ayaa ugu horeyn waxaa laga fuliyey xarunta wasaaradda amniga gudaha oo wadooyinka gala laga qaaday inta badan dhagxaanta waaweyn ee horey loogu …
Taliyaha Cusub ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo Maanta Xilkii la Wareegay (SAWIRRO)
April 10, 2017 – Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen. C/xakiin Daahir Saciid (Saacid) ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay taliyihii hore ee ciidamada booliska Soomaaliyeed, sareeyo gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud. Munaasabada xil-wareejinta ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka Amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow …
Wasiirka Cusub ee Gaashaandhigga oo Tababar u soo xiray Ciidamo ay Dowladda Imaaraatka Carabta Tababartay (VIDEO)
April 10, 2017 – Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumada Soomaaliya Cabdi Rashid C/laahi Maxamed ayaa maanta tababar usoo xiray Ciidan isugu jira Kumaandoos iyo Milatari oo Dowlada Imaaraatka Carabta ku taba bartay magaalada Muqdisho Munaasabada Tababarka loogu soo xiray Ciidankan ayaa lagu qabtay xerada ay Ciidamada ku tababaraan dowlada Imaaraatka ee kutaala Agagaarka Kuliyadii hore Jaalle Siyaad, …
Munaasabadii Tababarka loogu soo Xiray (VIDEO)
Munaasabada Tababarka loogu soo xiray Ciidankan ayaa lagu qabtay xerada ay Ciidamada ku tababaraan dowlada Imaaraatka ee kutaala Agagaarka Kuliyadii hore Jaalle Siyaad, waxaana munaasabada ka qeyb galay Wasiiro, Saraakiil ciidan iyo xubno ka socday Dowlada Imaaraatka. Waxa uuna sheegay Wasiirka in ay ciidankan yihiin kuwa u diyaarsan in dalka ka xoreeyaan cadowga , waxa …
Madaxweynaha Dalka Masar oo Xaalad Deg-Deg ah Geliyay Dalkiisa, Weerarkii Kaniisadda Kadib (VIDEO)
April 10, 2017 – Madaxweynaha dalka Masar, Cabdulfataax Al-Sisi ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay dalkiisa, kadib markii niman isi soo miidaamiyay shalay ay isku qarxiyeen labo kaniisadood oo ku kala yaala magaalooyinka waaweyn ee dsalkaasi. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib weerarradii ismiidaaminta ahaa ee lagu laayay dad ka badan 45 qof, iyadoo halkaasina …
Xaaladda Deg-Dega ee Dalka Masar (VIDEO)
Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib weerarradii ismiidaaminta ahaa ee lagu laayay dad ka badan 45 qof, iyadoo halkaasina ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. Masiixiyiinta laga tirada badan yahay ee dalka Masar ayaa waxaa horay loola beegsaday weerarro noocan ah, iyadoo weerarradan lagu soo beegay xilli Masiixiyiinta ay xusaan markii nebi Ciise CS uu …